Miyay tahay inaad maal gasho Kormeerka Dib-u-eegista ee Internetka si aad u Maamusho Sumcaddaada? | Martech Zone
Amazon, Liiska Angie, Xayeysiin, TripAdvisor, Yelp, Ganacsiga Google, Yahoo! Liisaska Deegaanka, Xulashada, G2 Dad badan, TrustRadius, TestFreaks, Waa kuwee?, Isweydaarsiga Salesforce, Glassdoor, Qiimaynta & Faallooyinka Facebook, Twitter, iyo xitaa boggaaga gaarka ah ayaa ah dhammaan meelaha lagu qabsado laguna daabaco dib u eegista. Haddii aad tahay B2C ama shirkad B2B… fursadaha ayaa ah in uu jiro qof wax kaa qoraya khadka tooska ah. Kuwaas dib u eegista internetka ayaa saameyn ku leh.
Waa maxay Maareynta Sumcadda?
Maareynta sumcadda waa habka kormeerka iyo maaraynta sumcadda shaqsi ama ganacsi khadka tooska ah. Asal ahaan ereyga xiriirka dadweynaha, horumarka natiijooyinka raadinta dabiiciga ah, warbaahinta bulshada, iyo boggaga dib u eegista dadweynaha waxay ka dhigtay maareynta sumcadda mid muhiim u ah iibka iyo dadaalka suuqgeynta shirkadda.
Adeegyada kormeerka sumcadda had iyo jeer u digo shirkad waqtiga dhabta ah marka dib u eegista liidata lagu soo gudbiyo khadka tooska ah. Haddii si fiican loo feejignaado loona jawaabo, shirkaduhu waxay ka shaqeyn karaan inay xalliyaan khilaafka ka hor intaan la wadaagin oo ay waxyeello intaa ka sii badan u geystaan. Sidoo kale, shirkaduhu waxay ka faa'iideysan karaan xallinta khilaafaadka si macaamiisha ay u arkaan jawaabta wanaagsan ee nad ee ay shirkaddu rabto inay siiso macaamiisheeda.
Istaatistikada Muhiimka ah ee Dib u eegista Internetka
71% macaamiisha ayaa ku raacsan dib u eegista internetka inay ku qanacsan yihiin go'aanka iibsigooda.
83% jawaabeyaasha ayaa sheegay inay ku kalsoonaan lahaayeen dib u eegista isticmaale ee dhaleeceynta.
70% macaamiisha ayaa la tashanaya dib u eegista ama qiimeynta kahor iibsiga.
Dib-u-eegista macaamiisha waxay abuuraan 74% kororka beddelaadda alaabta.
Faallooyinku waxay wadaan 18% daacadnimo sare iyo 21% qanacsanaanta iibsiga.
Dhammaan ma fiicna, in kastoo. Waxaa lagu qiyaasay in 10-15% dhammaan dib u eegista warbaahinta bulshada ay noqon doonaan kuwo been abuur ah. Dib u eegista been abuurka ah ayaa kasbatay dareenka labada dowladood iyo tafaariiqleyda intaba. Amazon ayaa dacwaynaysa in ka badan kun adeeg dib u eegis wax soo saar been abuur ah.
Waa danta ugu fiican ee Amazon. Dib u eegista been abuurka ah ee Amazon khasab kuma ahan inay waxyeello u geysato soo saaraha wax soo saarka, laakiin waxay gabi ahaanba dhaawaceen magaca Amazon sidoo kale waxay ku kiciyeen lacag maaddaama qanacsanaanta macaamiisha liidata ay horseedi karto soo noqosho sare Shuruudaha adeegsiga ee Amazon ayaa mamnuucaya dib u eegista beenta ah, waxayna ku dacwooneysaa jebinta heshiiska iyo ku xadgudubka sharciyada ilaalinta macaamiisha.
Dadweynaha.com waxay siisaa macaamiisha iyo ganacsiyada fursad ay ku dhajiyaan sheegashada oo ay kaliya u shaaciyaan marka qaataha uusan ka jawaabin ama uusan raadin inuu wax ka qabto xaaladda. Looma baahna garyaqaano ama dhexdhexaadin. Waxay bixiyeen macluumaadkan, Dib u eegista Faallooyinka.
Marka… jawaabtu gabi ahaanba waa! Waa inaad kula socotaa dadkaaga, ganacsigaaga, iyo alaabadaada qaabab kormeer sumcad leh si loo hubiyo inaad kajawaabi karto oo aad kuheyn karto sumcad weyn khadka tooska ah.
Tags: AmazonLiiska Angiedib u eegista ganacsigaXulashadadib u eegista macaamiishaQiimaynta & Faallooyinka Facebookg2 dad badanGlassdoorgoogle ganacsigeygaFaallooyinka internetkadad sheeganayamaaraynta sumcaddib u eegista kormeerkaReviewsiibinta iibsigaTestFreaksTripadvisoraaminaadaaminaadTwitterWaa kuwee?Yahoo! Liisaska DeegaankaYelp